EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၁-၅)
ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု နှစ် ၃၀ အတွင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာ
ဒုက္ခသည် ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေး မလေး လုပ်ဆောင်မယ်
လှေစီးပြေးဒုက္ခသည်အရေး အမေရိကန်ဒုနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးနှင့် မြန်မာသမ္မတတို့ ဆွေးနွေး
မုံရွာ မူလတန်းပြရာထူး(PPTT) စာမေးပွဲ (ပေးစာ)
တိုက်ခန်း(၈)လွှာပေါ်မှ ပြုတ်ကျတဲ့ အမျိုးသားတဦး အသက်ရှင်
ညောင်ဦးမြို့နယ် ရထားလမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်သွားလာနေသော ကားတစ်စင်းကို ညောင်ဦးရဲစခန်းက အရေးယူ
ကလေးငယ်တဦး မဲဆောက်တွင် အခိုးခံရ
ကျော်သူရကတော့ ခေါင်းလောင်းတချက် ထိုးလိုက်ပါပြီ
အမေရိကန် နှင့် တရုတ်စစ်ရေယာဉ်များ တောင်တရုတ်ပင်လယ် အတွင်းရှိ အငြင်းပွား နေပိုင်နက်အတွင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ
ရှမ်းပြည်နယ်မှ လယ်သိမ်းခံ တောင်သူတဦး မိမိကိုယ်ကို မီးရှို့ဆန္ဒပြ
လယ်ယာမြေသိမ်းကိစ္စ မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်၍ နတ္တလင်းမြို့နယ်မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တချို့ နုတ်ထွက်
ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ခြောက်ပွင့်ဆိုင်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး သမ္မတဦးသိန်းစိန် စိတ်အား ထက်သန်ခြင်းမရှိဟု ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
အမေရိကန်က အီရတ်ကို ဒုံးကျည်တွေ ပို့ပေးမယ်
ခုနစ်နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူတစ်ဦး ကျောင်းကားနောက် မီတာ ၃၀၀ အထိ တရွတ်တိုက် ပါသွားခဲ့သော်လည်း အသက်ရှင်
၀က်သက်ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေ ၄၅၀၀ ထိ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် အာဏာပိုင်များ စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိ
ဘဏ်တိုက်ကြီးတွေ မသမာမှု ဒဏ်ရိုက်ခံရ
တစ်နာရီအနည်းဆုံးလုပ်ခ ၁၅ ဒေါ်လာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကောင်စီ အတည်ပြု
ပါလ်မိုင်ရာ မြို့ ဟောင်း IS သိမ်းပိုက်
Posted: 21 May 2015 06:56 AM PDT
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် ဆားဘီးယား နိုင်ငံများသို့ မေလအတွင်း ခရီးသွားရောက်ခြင်းမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနက် အင်အား အကြီးဆုံး ဖြစ်သည့် UWSA ကို တိုက်ခိုက်ရန် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု မေလ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် 'သူရိယနေ၀န်း'ဂျာနယ်က ဖော်ပြသည်။ မေလ ၁ ရက်မှ ၆ ရက်နေ့အထိ '၀'ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
အချမ်းသာဆုံး ၁၀ ရာနှုန်းရဲ့ ဝင်ငွေက အဆင်းရဲဆုံး ၁၀ ရာနှုန်းထက် ၁၀ ဆ နီးပါး ရှိလာ။ ကမ္ဘာပေါ်က ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံ အများစုမှာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမှုဟာ နှစ် ၃၀ အတွင်း အမြင့်ဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ OECD ရဲ့ ထုတ်ပြန် ချက်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ ဒီလို မညီမျှမှုတွေ တိုးမြှင့်လာတဲ့အတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေရုံသာမက လူမှု အသိုင်းအဝို
Posted: 21 May 2015 07:04 AM PDT
အင်ဒိုနီးရှား၊ အာချေး အရှေ့ပိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်တွေကို စိစစ်ရေး ဆောင်ရွက်နေ။ မလေးရှား နိုင်ငံ အနေနဲ့ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ထဲမှာ ရှိနေသေးတဲ့ လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ လှေတွေကို ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ် ရာဇက်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားတဲ့ အကူအညီ တွေကိုလည်း မြေပြင်နဲ့ ပင်လယ်ပြင် ကနေ ပေးပို့ သွားမယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်မှာ လှေစီး ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၇ ထောင်ေ
Posted: 21 May 2015 06:40 AM PDT
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ခန်တို့ နေပြည်တော် တွေ့ဆုံမှု အတွင်း လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်အရေး အဓိကထား ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ်လို့ သမ္မတပြောခွင့်ရ ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။ မေလ ၂၁ ရက်က တွေ့ဆုံခဲ့ကြရာမှာ သမ္မတက လှေစီး ဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာ အစိုးရ လုပ်ဆောင်သွားမှာ တွေကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။ “(၁) ကတော့ ဒီလူတွေအားလုံးဟာ ဟိုဘက်ကိုရော
Posted: 21 May 2015 06:37 AM PDT
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းပညာရေးမှူးရုံးမှ ဦးစီးကျင်းပသော လုပ်ငန်းခွင်အကြို မူလတန်းပြ ရာထူး(PPTT) စာမေးပွဲကို မုံရွာမြို့တွင် မုံရွာခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်များမှ BA, MBA, BSc, MSc, MREs ဘွဲ့ရသူများ အသက်(၃၀)နှစ်အတွင်း ရှိသူများကို အင်္ဂလိပ်စာ(၁၀၀)မှတ်ဖိုး (၂)နာရီမေးခွန်း၊ အထွေထွေဗဟုသုတ(၁၀၀)မှတ်ဖိုး (၂)နာရီမေးခွန်းကို (၅.၅.၂၀၁၅)ရက်နေ့က ဖြေဆိုကြရပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်းတော်တော်ကောင်းပါသည်။ ဖြေ
Posted: 21 May 2015 06:57 AM PDT
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၀ ၁၉.၅.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၂၃၀၀ အချိန်တွင် လမ်းမတော်မြို့မ ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်ရှိ တိုက်ခန်း(၈)လွှာပေါ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြုတ်ကျကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး တိုက်ပေါ်မှပြုတ်ကျခဲ့သဖြင့် ဒဏ်ရာရ ထိုသို့သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ပြုတ်ကျသူအမျိုးသားမှာ အဆိုပါတိုက်ခန်းနေ အသက်(၂၁)နှစ်ရှိသူဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ဦးခေါ
Posted: 21 May 2015 05:59 AM PDT
ညောင်ဦး၊ မေလ ၂၁ ။ မေလ ၂၀ ရက် နေ့ လယ် ပိုင်းကညောင်ဦးမြို့နယ် ၊ အတွင်းရှိ မီးရထားလမ်းပေါ် တွင် မော်တော် ကား တစ် စင်း တက်ရောက် မောင်း နှင် ခဲ့သည့်အတွက် ၊ အဆိုပါယာဉ် အား မောင် နှင်သူကို အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း ညောင်ဦးမြို့မ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးက မေ လ ၂၁ ရက် ညနေ ပိုင်းတွင် Oriental News သို့ပြောသည်။ “ညောင်ဦးမြို့ ရထားလမ်းပေါ်တက်ပြီး မဆင်မခြင်မောင်းလာတဲ့ ကားတစ်စီးကို အရေးယူထားပါတယ်
Posted: 21 May 2015 05:55 AM PDT
အမည်မသိ လူတစ်ဦး တာချီလိတ်မြို့မ သုသာန်အတွင်း စွန့်ပစ်ခံထားရာမှ တာချီလိတ်မြို့ မဇ္ဈိမလူမှု ကူညီရေး အသင်းမှ တွေ့ရှိပြီး မေလ(၁၉)ရက် နေ့လည်ပိုင်းက ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ကုသပေးနေစဉ် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။ “ကျွန်တော်တို့ မြို့မသုဿန်ကို အသုဘသွားပို့တုန်း လူတစ်ဦး သတိလစ်ပြီး မေ့နေတာ တွေ့လို့ ဆေးရုံပို့ပြီး ကုပေးတယ်၊ သူ့နာမည်လဲ မသိဘူး၊ ကြည့်ရတာ အခြေအနေလဲ မကောင်းဘူး၊အသက်ငင်နေတဲ့ ပုံဖြစ်နေတယ်၊ အဲ့
Posted: 21 May 2015 05:49 AM PDT
တာ့ခ်ခရိုင် မဲဆောက်မြို့ထဲမှာ မြန်မာကလေးငယ်တဦး အိပ်နေရင်း အခိုးခံရတယ်လို့ ဒီဗွီဘီက သိရပါတယ်။ အသက် ၈ လ အရွယ်ရှိ သမီးမိန်းကလေး အိုအိုင်ရှေးဟာ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ညက ကုန်းဆီအယုဒ္ဓယ ဘဏ်(မဲဆောက်ဘဏ်ခွဲ)နားမှာ အခိုးခံခဲ့ရတာလို့ မိခင်ဖြစ်သူ မဟာကီမား က ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက်ကို ပြောပါတယ်။ “သူနဲ့ သူ့ဦးလေးနဲ့ ဂိမ်းလာဆော့နေတာ၊ ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ ကလေးက ညောင်းလို့ အိပ်ပျော် သွားရော၊ ကလေးလည်းအိပ်ပျော်တယ်။ အိပ်နေရင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ နကောစီဌာမရ ပြည်နယ် ကျယ်စဒါ မြို့ နယ် မှ ထူးဆန်းသည့် မျက်လုံးအရောင်နှစ်မျိုးနှင့်မောင်နှစ်မ နှစ်ဦးအား ဆရာဝန်များက စစ်ဆေးနေကြပါတယ်။ သူတို့ မောင်နှမမှာ ညအမှောင် ပိုင်းတွင် တိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့အမှောင်ကို ဖေါက်ထွင်းမြင်နိုင်ကြလို့ထူးဆန်းတဲ့ မျက်လုံးပိုင်ရှင်လေးတွေ လို့အွန်လိုင်းမှာ နံမည်ကြီးနေတာပါ။ ထိုင်းလူမျိုးတွေကတော့ သာဖက် "စိန်မျက်လုံး "မျက်ရှင် လို အမည်ပေးထားသည်
“တရားစီရင်မှာကို မစောင့်စား နိုင်တော့သဖြင့် ယခုလို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ တရားစီရင် လိုက်ပြန် တော့လည်း ကိုယ့်ဘ၀မှာ၊ ကိုယ့်မိသားစုမှာ တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့် ရပြန်ပါတော့သည်။ ကိုယ်တိုင်က လူသတ်မှုဖြင့် နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် (အခန့်မသင့်ပါက သေဒဏ်ထိ)ခံစားရမည်ဖြစ်သလို ရောဂါသည်ဇနီးခမျာလည်း အားကိုးရာမဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့မည် ဖြစ်ပါသည်။…” ----- ----- ----- ----- ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းတကော်မြို့၊ ရွှေပြည် ၃ ရေလှောင်တမံ သွားရာလ
Posted: 21 May 2015 05:30 AM PDT
၀ါရှင်တန် ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၅ တောင်တရုတ် ပင်လယ်အတွင်း ရှိ အငြင်းပွား ရေပိုင်နက် နေရာ တစ်ခုဖြစ်သည့် စပရက်တလီ ကျွန်းစု အနီးတွင် အမေရိကန်နှင့် တရုတ် စစ်သင်္ဘော များသည် ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း Press TV က ယမန်နေ့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အမေရိကန် စစ်သင်္ဘော တစ်စီး ဖြစ်သည့် USS Fort Worth သင်္ဘောသည် တရုတ် စစ်သင်္ဘောနှင့် အငြင်းပွား ရေပိုင်နက် တစ်ခုဖြစ်သည့် စပရက်တလီ ကျွန်းစုအနီးတွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး
စစ်တွေ၊ မေ ၁၉ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ သွားနေကြသည့် လှေစီး ဘင်္ဂါလီများ အထဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ပါဝင်ခြင်း မရှိဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် မှတ်တမ်းပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း က ထုတ်ဖော် ပြောဆို လိုက်သည်။ မေလ ၁၉ ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဦးလှသိန်းက ထိုသို့ ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted: 21 May 2015 05:29 AM PDT
စစ်တွေ၊ မေ ၁၉ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်းတွင် သောင်တင်နေသော ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ၁၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးမိပြီးနောက် မောင်တောနယ်စပ် အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ် ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်တွင် တပ်မတော်(လေ)၊ တပ်မတော် (ရေ) အပါအ၀င် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့အင်အားကို တိုးချဲ့ချထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံသား ၁၁ ဦးကို မေလ ၁၇ ရက်နေ့၊ နံနက် ၇ နာရီအချိန်က မောင်တောမြို့နယ်၊ ဥဒေါင်း (အနောက်) ကျေးရွာ
Posted: 21 May 2015 05:23 AM PDT
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့နယ် ကွန်လုံကျေးရွာအုပ်စု ရေပူရွာက တောင်သူလယ်သမား တဦးဟာ သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ဒီမနက် မိမိကိုယ်မိမိ မီးရှို့ဆန္ဒပြရာမှာ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရပြီး ဆေးရုံမှာ ကုသနေရပါတယ်။ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က အဓမ္မသိမ်းဆည်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်လယ်ကို ပြန်ပေးဖို့ ဦးမြင့်အောင်(အသက် ၆၃) နှစ်ဟာ မနက် ၇ နာရီမှာ မိမိကိုယ်မိမိ မီးရှို့ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူက လယ်
Posted: 21 May 2015 05:19 AM PDT
လယ်ယာမြေသိမ်းကိစ္စတွေကို မဆောင်ရွက် ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် နတ္တလင်းမြို့နယ် စမ်းချောင်း၊ ဖလံပင်၊ ဒမငယ် စတဲ့ကျေးရွာ အုပ်စုတွေက ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင် ၁၅၀ ကျော် ဒီနေ့ နှုတ်ထွက် ခဲ့ကြပါတယ်။ “ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီ မြေယာသိမ်းကိစ္စတွေမှာ ပြည်သူအကျိုးကို မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လို့ နှုတ်ထွက်တာပါ။ တခြားရပ်ရွာကိစ္စတွေမှာတုန်းက အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီကိစ္စမှာတော့ မကျော်လွှားနိုင်ဘူး’’
Posted: 20 May 2015 11:25 PM PDT
မေ . ၂၁ . ၂၀၁၅ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာ ရပ်ကွက် ( ၅ )တွင် မေလ ၂၀ရက် ၂၀၁၅ ည ၈နာရီခွဲခန့်က ဦးကျော်ဆွေ အိမ်မှ စတင်ကာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ မီးလောင်မှုသည် ဘက်ထရီအိုးများ အားသွင်းထားခြင်းမှ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ကာ လောင်ကျွမ်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားသည်နှင့် ဖားကန့်မြို့နယ် မော်စီစာ ဖားကန့်မီးသတ်ဌာနများ မီးသတ်ကားများ ရောက်ရှိလာပြီး
Posted: 20 May 2015 10:46 PM PDT
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ခြောက် ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် စိတ်အား ထက်သန်ပုံ မရဘူးလို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ RFA က သီးသန့်တင်ဆက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်း နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်အတွက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ သူက အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ "ဘာလဲဆိုတော့ အခုထက်ထိလည်း ဒုတိယအကြိမ်
Posted: 20 May 2015 10:36 PM PDT
အီရတ်နိုင်ငံမှာ IS အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့ လက်ထဲ ရာမာဒီမြို့ ကျသွားအပြီးမှာ အမေရိကန်အစိုးရက အီရတ်အစိုးရထံ တင့်ကားပစ် ဒုံး ၁၀၀၀ ပေးပို့မယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဘဂ္ဂဒက်မြို့ အနောက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ရာမာဒီမြို့တိုက်ပွဲမှာ IS တွေဘက်က သုံးနေတဲ့ ခေတ်မီ ဖောက်ခွဲရေး စက်ကိရိယာတွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကြီးတွေကို တန်ပြန်တိုက်ရာမှာ ဒီ missile ဒုံးတွေက အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မယ်လို့ အမေရိကန် စစ်တပ်
Posted: 20 May 2015 10:28 PM PDT
ဖရန့်ဖို့တ် ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၅ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၊ ကင်တပ်ကီ ပြည်နယ်တွင် ခုနစ်နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူ တစ်ဦးသည် ကျောင်းကား တစ်စီးနောက်မှ မီတာ ၃ဝဝ အထိ တရွတ်တိုက် ပါသွားခဲ့ သော်လည်း အသက်ရှင် ခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင် များက ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသူသည် လူးဝစ်စ်ဗေးမြို့ ရှိ Wilkerson Traditional Elementary ကျောင်းမှ လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အကုန်၌ ထွက်ခွာလာ၍ လမ်းဘေးတွင် လမ်းလျှောက် လာစဉ် ၄င်း၏ ကျောပိုးအိ
Posted: 20 May 2015 10:26 PM PDT
ဆစ်ဒနီ ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၅ သြစတြေးလျ နိုင်ငံ ကွင်းစလန်း ပြည်နယ် မှ ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင် များသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဝက်သက်ရောဂါ ကူးစက်မှု မြင့်တက် လာခြင်းကို စိုးရိမ် ပူပန်လျက် ရှိပြီး ယင်း ရောဂါသည် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ ကိုပါ ကူးစက် လာနိုင်ဖွယ် ရှိသည်ဟု သတိပေးချက် ထုတ်ပြန် ထားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဝက်သက် ရောဂါသည် အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦး အား ရောဂါကူးစက် ခံရပြီး ၄င်းက ကမ္ဘာလှည့် ခရီး
Posted: 20 May 2015 07:42 PM PDT
အသက်အသေခံ တိုက်ချင်သလား၊ Jihad လမ်းစဉ်ကို ဘယ်လို အကောင်အထည် ဖော်ချင်သလဲ၊ သူရဲကောင်းအဖြစ် သေဆုံးသွားရင် ဘယ်သူ့ကို ဆက်သွယ်ရမလဲ၊ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်း ရှိသလား၊ တကယ်လို့ရှိခဲ့ရင် သူတို့က ငါတို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မလား - စတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ al-Qaida ဆီမှာ အလုပ်လျှောက်ရင် ဖြေဆိုရမယ့် မေးခွန်းတချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံက Navy SEAL
Posted: 20 May 2015 07:39 PM PDT
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘဏ်ကြီး ၅ ခုတို့ဟာ ငွေတန်ဘိုး လဲလှယ်ရေးမှာ တရားမ၀င် ပူးပေါင်း ကြံစည်ပြီး ဈေးကစား ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၇ ဘီလီယံ ဒဏ်ရိုက်ခံရမယ့် အခြေအနေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီဘဏ်တိုက်ကြီးတွေက ငွေကုန်သည်တွေဟာ ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သူတွေ အဖြစ် ဒေါ်လာနဲ့ ယူရိုငွေကြေးကို အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ အမေရိကန် တရားရေး အရာရှိတွေက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ သူ
Posted: 20 May 2015 07:33 PM PDT
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မေ ၂ဝ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့တော်ကောင်စီက အလုပ် သမားများ၏ လုပ်ခလစာကို လက်ရှိတစ်နာရီလျှင် ကိုးဒေါ်လာမှ ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် ထက်နောက်မကျဘဲ အနည်းဆုံး ၁၅ ဒေါ်လာအထိ မြှင့်တင်ရန် မေ ၁၉ ရက်တွင် မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်သမားအုပ်စုများ၏ အောင်မြင်မှုသည် အခြားသော အမေရိကန် မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးဒေသများ၌လည်း လုပ်ခလစာ တိုးမြှင့်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်
Posted: 20 May 2015 05:36 PM PDT
ကျောက်တိုင် ကျောက်မုခ်ဦးတွေ နဲ့ မြို့ဟောင်းကြီး IS အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံတပ်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းက အကြီးဆုံး ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် နေရာ ဖြစ်တဲ့ ဆီးရီးယား က ပါလ်မိုင်ရာ မြို့ဟောင်းကို ထိန်းချုပ် နိုင်သလောက် ရှိနေပါပြီ။ ယူနက်စကို အဖွဲ့ က အရေးကြီးတဲ့ ကမ္ဘာ့ မှတ်တိုင် ဌာန တခု အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတဲ့ ဒီမြို့ဟောင်းကို စစ်သွေးကြွတွေ ဖျက်ဆီးမှာ ကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ အရင်ကလည်း အီရတ် နိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ မထွန်း